ဥရောပသမဂ္ဂမှ ပေးအပ်ထားသည့် GSP ပြန်လည် မရုပ်သိမ်းရေးအတွက် အလုပ်သမားသမဂ္ဂများနှင့် ကုန်သည်စက်?? - Yangon Media Group
ဥရောပသမဂ္ဂမှ ပေးအပ်ထားသည့် GSP ပြန်လည် မရုပ်သိမ်းရေးအတွက် အလုပ်သမားသမဂ္ဂများနှင့် ကုန်သည်စက်??
ဥရောပ သမဂ္ဂမှ ပေးအပ်ထားသည့် GSP ပြန်လည်မရုပ်သိမ်းရေးအတွက် အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ၊ အဖွဲ့ချုပ် များနှင့် ကုန်သည်စက်မှုအသင်း ချုပ်တို့ပူးပေါင်း၍ ပူးတွဲကြေညာ ချက်တစ်စောင်ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များ နှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် (UMFCCI)၊ မြန်မာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသ မဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (CTUM)၊ မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှုလက်မှုဝန်ဆောင် မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံ အလုပ်သမား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (MICS-TUsF)၊ တို့ပူးပေါင်းကာ “Together We Succeed,Why GSP is Essential for Decent Work and Industrial Peace” ပူးတွဲကြေငြာချက်တစ်စောင် ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်က ရန် ကုန်မြို့ ကုန်သည်စက်မှုအသင်း ချုပ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဆွေး နွေးပွဲအပြီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မင်းဝင်းက ”ဒီနေ့ ကျင်းပရတဲ့ အခမ်းအနားရည်ရွယ် ချက်ကတော့ ဆွေးနွေးပွဲကိုတက် ရောက်ပါဝင်သူတွေက GSP ပြန်လည်မရုပ်သိမ်းရေးကိုဝိုင်းဝန်းပြီး ထောက်ခံသွားဖို့ပါ။ နောက်တစ် ချက်ကတော့ ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက် မှာ ကျွန်တော်တို့အသင်းချုပ် UMFCCI နဲ့ CTUM တို့ရဲ့ ပူး တွဲဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပေါ်ထွက် လာရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲ လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများမှ GSP ပြန်လည် မရုပ်သိမ်းနိုင်ရေးအတွက် လက် မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုခြင်းများ ပြုလုပ်သွားရန် ရည်ရွယ်ချက် တွေ နဲ့ ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု ယင်းဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြောသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂသည် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးနှင့်အလုပ်သ မားရေးရာ ကိစ္စရပ်များတွင် တိုး တက်ပြောင်းလဲစေရန်ဆောင်ရွက် ချက်များကို အသိအမှတ်ပြုသည့် အနေဖြင့် Generalized System of Prefernces(GSP) ကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ သော်လည်း ပြီးခဲ့သည့်လပိုင်းအတွင်း အီးယူကုန်သွယ်မှုအခွင့်အ ရေး စိစစ်လေ့လာရေးအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း ၍ ပေးအပ်ထားသော GSP အခွင့်အရေးကို ရုပ်သိမ်းရန်အတွက် ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ရန် လာရောက် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ့လူမှု စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးအဖွဲ့ အမှုဆောင်ညွှန် ကြားရေးမှူးဦးဇော်ဦးက ”ကျွန် တော်တို့အလကားနေရင် GSP ကို ရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးခဲ့ တဲ့ငါးနှစ်အတွင်းမှာ ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်ဟာ အီးယူကို ဆယ်ဆမက တင်ပို့မှုတက်သွား တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ YGSP ဘာ ကြောင့်ဆက်ပေးသင့်သလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ထဲ မှာ အများဆုံးပြောထားတယ်။ အကယ်၍အဲဒါကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ရင် နောက်ဆက်တွဲ ဘာတွေဖြစ်မလဲ ဆိုတဲ့ကိစ္စ အလုပ်သမားတွေ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေ အလုပ်ရုံတွေပိတ်သွားတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကို ထိခိုက် နစ်နာနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေ အရေးကြီး ဆုံးက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ made in Myanmar ဆိုတဲ့ brand လေးမ ပျောက်သွားအောင်ကြိုးစားပြီး ဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသုံးချက်ကတော့ အီးယူဘက်က တာဝန်ရှိသူတွေ စနစ်တကျလေ့ လာသုံးသပ်ပြီး အကောင်းဆုံးစဉ်း စားပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟုပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံများသို့ ပို့ကုန်များတင်ပို့ ရာတွင် ချည်မျှင်နှင့် အထည်အ လိပ်မှ ၇၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အများဆုံးတင်ပို့လျက်ရှိပြီး အကယ်၍ GSP ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါက အထည် ချုပ်ကဏ္ဍသည် ထိခိုက်မှုအများဆုံး ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသိရသည်။
''ငါတော်ပြီလို့ တွေးတဲ့ နေ့က အဲဒီအနုပညာရှင် ဂွမ်းမယ့်နေ့ပဲ'' ခင်သဇင်